ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 37.5 ဘ၀အမောကြားက ပြုံးရယ်ဟား
အစ်ကိုကြီးရယ်...။ ဖြဲလိုက်တဲ့ အခြမ်းက ပေါက်တာ မဟုတ်ပဲ တစ်ခြားဘီးက ပေါက်နေရင်ကော...။
I think should be hole is from ur tear side. that why u can not find another hole. really enjoy lifeako....
ကဘွိုင်းဇ်ရယ်.. စက်ဘီးပေါက်တယ်ဆိုတာ..လေထိုးစီးပေ့မယ့် ဘီးပြားပြားသွားလို့..သိကြရတာ...။ များသောအားဖြင့်လဲ နောက်ဘီးကဖြစ်တာများတယ်။ ဘီးပေါက်လို့လာအပ်ရှင် ပြားနေတဲ့ဘီးဘက်ကပဲ ဖြစ်တော့မပေါ့........ ဟော့.. ဟေ့ာ...။
စက်ဘီးမစီးခဲ့ဘူးဖူးထင်ပါ့... ။စက်ဘီးနဲ့သွား၊ စက်ဘီးနဲ့လာလုပ်ခဲ့ရတဲ့ ငယ်ဘ၀ကို ခုမှ ပိုလွမ်းသွားတယ်။ ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ကြီးမှာ.. မြို့ကြီးသူလာလုပ်ရကတည်းက စက်ဘီးများနဲ့ ဝေးခဲ့တာ..။
တာယာကို ကလော်လိုက်တဲ့ ပရက်ရှာလေးနဲ့ ကျွတ်က ပြဲထွက်မသွားလောက်ပါဝူး....အကိုရယ်...
နဂိုကတည်းက ပြဲနေတဲ့ အပြဲကြီးနေမှာပါဗျာ...
အကိုကလော်လိုက်တဲ့ ပရက်ရှာကြောင့် ပြဲတာဆိုရင်တော့ ရွှေဒူဝံ နဲ့ ဝမ်ချိုင်း တို့ ဂျွန်းထိုးပီးငိုကြလိမ့်မယ်.... ဟိဟိ..
ဟဟဟဟ..ပေါက်တဲ့ နေရာကိုဖြဲ ပစ်တာပေါ့လေ